Stainless Steel Machining & Imimandla-News-Chuanghe Fastener Co., Ltd
Iintsimbi zeStainless kunye neMacandelo
Ixesha: 2019-12-10 Indawo: 45
Jika ku-Chuanghe Fastener kwiimfuno zakho zokwenza umatshini ngentsimbi. Sinamava amashumi eminyaka yamava okusombulula iimveliso zentsimbi ekumgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngamabakala ohlukeneyo enziwe ngentsimbi. Siza kuqinisekisa ukuba ufumana iinxalenye ozifunayo, nokuba yeyomceli mngeni.
Isinyithi engenanto iyinto efanelekileyo yokumelana nokudumba, ukubeka amabala, kwaye inikezela ukugcinwa okuphantsi kunye ne-luster yezicelo ezininzi. I-Stainless Insimbi igalelwa kwiikhoyili, iisheyibhile, iipleyiti, imivalo, ucingo kunye ne-tubing kuyo yonke imilo nobukhulu. Amanye amashishini asebenzisa isinyithi engenazintsu, okokusebenza endlwini, kwezonyango, kwezaselwandle, kwezithuthi nakwizixhobo zemizi-mveliso. Isinyithi esingenazimbotshana sinokufakwa isitampu, siphoselwe, sisetyenzisiwe kwaye sineentloko ezibandayo.
* Ifumaneka nge-intshi kunye nee-metic size.
Iindidi eziqhelekileyo zeStainless ziquka:
· 303 -Umgangatho ongenakusebenza kunye non-eyonakalisayo yensimbi engenasici enefomati enkulu yokwakha.
· 304 -Udidi olunganyangeki kangako lwentsimbi engenanto enomtsalane kulungiso lokutya nakumashishini aerospace.
· 316 -Eyefana ne-304, 316 ibakala yentsimbi engenasici ilungele ukusetyenziswa kubandakanya imichiza evuthisayo kwaye isetyenziswa kwezinye izixhobo zonyango nakwiimeko ezingasebenzi kakuhle.
· 416 - I-416 yentsimbi engenasinyithi ilula ukuyitshayela kwaye ilungele iinxalenye ezifuna iipropathi ezomeleleyo zomatshini. I-416 ayixhathanga kakhulu kwi-kutu.
· 302 - I-302 yentsimbi engenanto iyamelana nokukora ngamandla amancinci ngenxa yecarbon eyongezelelweyo.
· 410 - I-410 yentsimbi engenasici yongeze amandla ngenxa yensimbi eyongeziweyo kunye ne-chromium. Ukuxhathisa kakhulu ukunxiba kunye ne-abrasion kodwa kuncinci ukunganyangeki kwi-corrosion.
· 430 I-430 yensimbi engenazintsimbi ingumhombiso ngakumbi kwaye isetyenziswa ngokubanzi kushishino lweemoto. Linciphise ubushushu kunye nokuchasana nokudumba kodwa liphucule ukubumba.
· A286 - I-A286 yentsimbi engenasiseko yinyani esekwe kwisinyithi kwizicelo ezihlala ziboniswa kubushushu obuphezulu.
· 17-4PH -Ikwabizwa ngokuba yintsimbi engenabala, i-630-17PH yintsimbi ye-martensitic eyomeleleyo. Inecromium eyongezelelweyo, i-nickel kunye nobhedu kwaye ayikwazi ukumelana ne-corrosion, umazibuthe kwaye ufumaneka lula kumatshini.
· 18-8 I-18-8 yensimbi engenasiseko luhlobo lwentsimbi engenaglasi eyi-300 equkethe i-18% ye-chromium kunye ne-8% ye-nickel.
INDAWO YOKUQHUTYELWA KWEQHINGA LES STEEL STEEL:
Icandelo elenziwe ngamachiza
IZIBONELELO ZOQEQESHO OLUFANELEKILEYO:
I-Corrosion kunye nobushushu obuchasayo
Ukomelela kunye nokuqina
I-PREV: I-Fastener Fair Stuttgart 2019
OKULANDELAYO : Izinto zoMatshini kunye neTekhnoloji yeZinto zoMatshini Expo Tokyo 2020